‘अबको बैंकिङको समय स्मार्ट बैंकिङ हो’ - Aarthiknews
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा लगानीयोग्य रकमको समस्या देखिएको पक्कै हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई तरलताको समस्या परेको छैन, हाम्रो सीसीडी रेसियो नै ६८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको हुँदा हामी अझै पनि कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामै छौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छ । हाल बैंकको १७७ अर्वको निक्षेप र १२७ अर्बको कर्जा लगानी रहेको छ । गत असोज मसान्तसम्ममा बैंकको खुद मुनाफा करिब १ अर्ब १२ करोड रहेको छ । बैंकको ७४ जिल्लामा २१० वटा शाखा कार्यालय छन् । हामीले हाम्रो व्यावसायिक लक्ष्य भेटाएका छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा, वित्तीय हिसाबले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबल छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आडभरोसा दिने र नेतृत्व गर्ने अपेक्षा देखिन्छ । तर, त्यस्तो पाइँदैन किन ?
सरकारी बैंक भएकाले सरकारी योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान दिइरहेकै छौं । अन्य बैंकहरुकोे कर्जा दिने अवस्था सहज नहुँदा पनि यस बैंकले कर्जाको मागलाई पूर्ति गरेर एवम् अन्य बैंकको क्रेडिट पर्चेज गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेकै छ । रावा बैंक नेपालको २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ठूला बैंकहरुमा एक मात्र हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा सम्भव भएसम्म योगदान दिने गरेको छ ।
पुरानो र सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नयाँ खुलेका निजीस्तरका बैंकको तुलना यसको उपस्थिति प्राविधिक एवम् भूगोलका दृष्टिकोणबाट कमजोर देखिन्छ किन होला । साथै नयाँ कर्मचारी आएपछि प्रविधियुक्त वाणिज्य बैंकलाई कसरी लैजाने योजना छ ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले जनतालाई ‘बैंकिङ आदत’ सिकाएको बैंक हो । हिजोको ढड्डा प्रणाली हुँदै आज आफ्नो सेवालाई कप्युटराइज प्रणालीमा लगिसकेको अवस्था छ । बिगतमा २१० वटा शाखा रहेको यस बैंकको द्वन्द्वकालमा शाखाहरु गाभिएर ११४ मा झारिएको थियो । तर, आजको दिनमा पुनः २ १० वटा शाखा कार्यालय पुगेका छन् । सम्पूर्ण शाखा कम्प्युटाइज प्रणालीबाट सञ्चालित छन् । बैंकले आफ्नो योजना अनुसार नै नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ । लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाबाट छनोट भएका नयाँ कर्मचारी सक्षम र सूचना प्रविधिको ज्ञान भएका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छ । हाल बैंकको १७७ अर्वको निक्षेप र १२७ अर्बको कर्जा लगानी रहेको छ । गत असोज मसान्तसम्ममा बैंकको खुद मुनाफा करिब १ अर्ब १२ करोड रहेको छ । बैंकको ७४ जिल्लामा २१० वटा शाखा कार्यालय छन् । हामीले हाम्रो व्यावसायिक लक्ष्य भेटाएका छौं ।
अहिलेको पुस्ता नै प्रविधिमैत्री भएकाले धेरै काम घरमै बसीबसी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता माध्यमबाट हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कुरा गर्दा यसको ग्राहक संख्या २७ लाखभन्दा बढी छ । नयाँ पु्स्ताका ग्राहकलाई बैंकमा थप आकर्षण गर्नका लागि थप अटोमेसन, स्मार्ट बैंकिङ आवधारण विकास गर्दै मजबुत सूचना प्रविधिको विकासबाट प्रविधिमा आधारित बैंकिङको लागि लगानी गरिरहेका छौं ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्न सकेन, जसका कारण व्यापार विस्तार गर्न समस्या रहेको भन्छन्, किन होला ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाउँ, शहर, युवा, बृद्ध, व्यवसायी, कर्मचारी, महिला, सर्वसाधारण जस्ता सबैखाले ग्राहक भएकाले सबै ग्राहकले बुझ्न सक्ने, प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको प्रोडक्टहरु हामीले चलाउनुपर्ने हुन्छ । तथापि, हामीले हिजोको परम्परागत बैंकिङ सेवालाई आधुनिक बैंकिङको रुपमा विकास गर्दै गइरहका छौं । आजको दिनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कारोबार मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम जस्ता इलेक्ट्रोनिक बैंकिङको माध्यमबाट कुल कारोबार संख्याको करिब ३५ प्रतिशतभन्दा बढी इलेक्ट्रोनिक कारोबारको हिस्सा रहेको छ ।
सरकारी खाता एवम् सेना, प्रहरी, कर्मचारीको खाताका भएकै कारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धानिएको हो भन्नेहरु पनि के त्यस्तै स्थिति हो र ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अहिले २७ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् । त्यसमा निक्षेपको संरचना हेर्नुभयो भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंश सर्वसाधारणको बचतको रहेको छ । हो, सरकारी कोषहरु पनि रहेको छ । हाम्रो निक्षेपको संरचना भनेको विविधिकरण छ । त्यसैले सरकारी कोषको पैसाले मात्र बैंक धानिएको अवश्य होइन ।
हामी अब प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ प्रोडक्ट लिएर अघि बढ्छौं । दक्ष जनशक्ति प्रविधि भित्राएर बैंकको विजनेसलाई बलियो बनाउने छौं । कर्मचारीको दक्षताको अध्ययन गरी सोही अनुसार काम गराउने साथै ग्राहक वर्गको अपेक्षा अनुसार प्रविधिमैत्री बैंकिङ बन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
व्यवसाय विस्तार एवम् प्रतिस्पर्धी बैंकहरुभन्दा पृथक बन्नका निम्ति राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अब आफूलाई कसरी अगाडि बढ्ने योजना छ ?
हामीले हरेक वर्ष कर्जाको पोर्टफोलियो म्यानेज गर्ने काम गर्छौ । हाम्रो योजना भनेको डिजिटल बैंकिङ सेवातर्फ जाने हो । अबको बैंकिङ भनेको स्मार्ट बैंकिङ हो हामी पनि त्यसतर्फ लाग्छौं ।
एकतातिर सहज कर्जा पाउन गाह्रो रहेको भन्ने जनगुनासो छ भने अर्कोतिर खराब कर्जाको दर पनि उच्च नै देखिन्छ, बास्तविक के हो ?
राष्ट्रिय वाािणज्य बैंकबाट कर्जा कारोबार गर्न गाह्रो छैन । ग्राहकले ७४ जिल्लामा रहेको हाम्रा २१० वटै शाखा कार्यालयमार्फत कर्जा लिन सक्नुहुन्छ । हो, बैंकले आफ्नो कर्जा निर्देशिका बमोजिम कर्जा लगानी गर्दछ । जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनीले कर्जा लिने हो उहाँहरुको प्रस्ताव कर्जा निर्देशिका बमोजिम भएमा मात्र कर्जा पाउनु हुन्छ नत्र कर्जा पाईदैंन ।
हो, रावा बैंकको खराब कर्जाको दर केही बढी छ । यसलाई हामीले कम गर्ने कार्य तदारुकताका साथ गरिरहेका छौं । हमीले यससम्बन्धी कार्य गर्न छुट्टै कर्जा असुली तथा पुर्नसंरचना विभागको समेत व्यवस्था गरेका छौंं ।
सरकारी लगानी रहेको नेपाल बैंकलगायतका सबै वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरिसकेका छन् । अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा एनआईडीसीका बाहेकका सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई कसरी समेट्ने तयारी गरेको छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सरकारी बैंकको हकमा सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने विषय नेपाल सरकार तथा बैंक सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार हुनेछ ।
संघीय ढाँचा अनुरुप राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्दै छ ?
हामी सरकारी बैंक भएकाले स्थानीय तहमा जानुपर्ने उत्तरदायित्व हाम्रो बढी छ । हुन त सबैजसो बैंकहरु स्थानीय तहमा जाँदैछन् । ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक सञ्चालन गर्ने सरकारी नीतिमा राष्टिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो भागमा परेको २ वटा शाखा कार्यालय मात्र खोल्न बाँकी छ, केही समयभित्रमा हामीले त्यहाँ पनि शाखा खेल्नेछौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुलाई २०७५ पुसभित्र प्रादेशिक संरचनामा जानको लागि निर्देशन दिइसकेको छ । अहिले सातमध्ये पाँचवटा प्रदेशमा पुराना क्षेत्रीय कार्यालयहरू छन् । २०७५ पुसभित्रमा सातै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने छौं ।
रावा बैंकले तरलताको कारणले कर्जा लगानी कार्य रोकेको छैन र अहिले पनि हामी कर्जा लगानी गर्न सक्ने स्थितिमा छौं र नयाँ कर्जा लगानी गरिरहेका छौं । बजारमा केही अफ्ठेरो स्थिति हुँदा पनि रावा बैंकलाई असर नपरेको अवस्था हो । आज पनि हामीले सबै वाणिज्य बैंकहरुको सरह नै मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दिइरहेका छाैं ।
बजारमा निक्षेपको अभाव हुँदा अरु बैंकले बढी ब्याज दिएर निक्षेप लिए, यसले वाणिज्य बैंकलाई कस्तो असर गर्यो ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सुरुदेखि नै तरलताको व्यवस्थापन गरिरहेकाले बजारमा निक्षेपको अभाव हुँंदा पनि हामीलाई खासै असर परेन । यसमा हामीले पनि ब्याजदर बजार अनुसार नै दिइएकाले हाम्रो निक्षेपमा असर परेन । रावा बैंकले तरलताको कारणले कर्जा लगानी कार्य रोकेको छैन र अहिले पनि हामी कर्जा लगानी गर्न सक्ने स्थितिमा छौं र नयाँ कर्जा लगानी गरिरहेका छौं । बजारमा केही अफ्ठेरो स्थिति हुँदा पनि रावा बैंकलाई असर नपरेको अवस्था हो । आज पनि हामीले सबै वाणिज्य बैंकहरुको सरह नै मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दिइरहेका छाैं ।
बजारमा सबैभन्दा सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । कुनै बैंकले आफ्नो असल कर्जा बिक्री गर्न चाहेमा समेत हामी क्र्रडिट पर्चेज गर्न सक्ने स्थितिमा छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन बमोजिम सापटी रकमलाई सापटी प्राप्त गर्ने बैंकको निक्षेपमा गणना भई त्यस बैंकको कर्जा योग्य लगानीमा सहजता आउने देखिन्छ । अन्य बैंकहरुले सापटी माग गरेको खण्डमा रावा बैंकले अन्तर बैंक सापटी उपलब्ध गराइरहेको छ ।